Kailani Masaesi E-Magnesium - Dhizaini magazini
Masaesi E-Magnesium Mabasa aArome Agency pane iyo graphic kuzivikanwa uye mhizha mutsara wekutakura Kailani akavakirwa pane mashoma uye akachena dhizaini. Iyi minimalism inoenderana neyakagadzirwa iyo ine imwechete inganganiswa, magnesium. Iyo typography yakasarudzwa yakasimba uye typed. Iyo inoratidzira zvese simba reiyo mineral magnesium uye nekusimba kwechigadzirwa, icho chinodzosera hutano uye simba kune vatengi.
Zita rechirongwa : Kailani, Vagadziri zita : Delphine Goyon, Izita remutengi : AROME.
Masaesi E-Magnesium Delphine Goyon Kailani